Ajụjụ: A ga-enwe akwụkwọ nke ise n'usoro ihe nketa - BikeHike
Ajụjụ: A ga-enwe akwụkwọ nke ise n'usoro ihe nketa
Usoro ihe nketa a agwụla?
Eragon ọ ga-abụ onye isi na akwụkwọ 5?
Bụ akwụkwọ ndụdụ, amoosu, na worm 5?
Christopher Paolini ọ na-arụ ọrụ n'akwụkwọ ọhụrụ?
Afọ ole ka Eragon na ihe nketa?
Enwere ihe na-esote ihe nkiri Eragon?
Eragon na Arya ga-anọkọ ọnụ?
Eragon ọ ga-alaghachi alagaesia?
Christopher Paolini ọ ga-alaghachi alagaesia?
Gịnị mere Shruikan ji buru ibu?
Kedu ihe Brom gwara Eragon?
Kedu ka Eragon dị n'akwụkwọ ahụ?
Gịnị mere ihe nkiri Eragon ji daa?
Brandon Sanderson bara ọgaranya?
Kedu akwụkwọ kacha ere ahịa oge niile?
Murtagh dị afọ ole na Eragon?
Arya ọ hụrụ Erago n'anya?
Afọ ole ka roran na ihe nketa?
Ọnye na-bụ dragọn uhie na Elder?
Ònye bụ dragọn ahụ na mkpuchi nke ọkpara?
Eragon ọ bụ onye na-agba dragọn kacha ike?
Eragon ọ na-esusu Arya ọnụ?
Gịnị bụ aha Eragon?
Murtagh ọ hụrụ nasuada n'anya?
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asaa gachara, Christopher Paolini ga-ewepụta akwụkwọ nke ise ya n'usoro usoro ihe nketa nke aha ya bụ The fork, the Witch, and the Worm. Akwụkwọ akụkọ fantasy nke ga-enwe mgbasawanye nke nkata na agwa ga-adị na US site na Disemba 31, 2018, yana na UK site na Jenụwarị 1, 2019.
Akwụkwọ nke anọ na nke ikpeazụ na usoro a, Nketa, bụ nke Knopf bipụtara na Nọvemba 8, 2011. Usoro a erela nde 33.5 n'ụwa nile.
Eragon/Saphira agaghị abụ ndị isi agwa na Akwụkwọ V.
The Fork, Witch, and Worm bụ akwụkwọ ise a kparịrị ogologo oge nke ị kwuru na ị ga-ede? Mba. The Fork, Witch, na Worm bụ mpịakọta mbụ nke usoro akụkọ ọhụrụ nke e debere n'ụwa nke Alagaësia.
Akwụkwọ akụkọ akụkọ sayensị ọhụrụ Paolini, To Sleep in a Sea of ​​Stars, bụ Tor Books wepụtara na Septemba 15, 2020. Ọ na-ezubekwa iji akwụkwọ nke ise laghachi ụwa nke Alagaësia mgbe ọ gụchara akwụkwọ akụkọ sayensị.
Na njedebe nke ihe nketa, Eragon dị afọ iri na asaa. Ọ hapụrụ Carvahall mgbe ọ dị afọ iri na ise wee gbara afọ iri na isii n'oge ọ na-achụ nta Ra'zac.
Ngbanwe nke 2006 nke Eragon enweghị usoro na enweghị atụmatụ maka franchise ga-aga n'ihu. Na mbido, enwere atụmatụ maka usoro abụọ, mana n'ihi nnabata adịghị mma nke ihe nkiri mbụ ahụ, emechara kagbuo atụmatụ ndị a, yana ikike ikike.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọtụtụ Eragon/Arya “ndị na-ebu ụgbọ mmiri” nwere nkụda mmụọ na di na nwunye ahụ akwụsịghị ọnụ. "Ihe ị ga-eburu n'uche bụ na ọ bụ ezie na usoro a agwụla, akụkọ Eragon na Arya ga-aga n'ihu. Ha ga-adị ndụ ogologo oge, mmekọrịta ha akwụsịbeghị.” Febụwarị 15, 2017.
Eragon enweghị ike ịlaghachi Alagaesia. Ma ọ bụrụ na agụụ ya maka Aria na-emetụta ya nke ukwuu ịgbanwe àgwà ya, mgbe ahụ ọ ga-akwụsị ịbụ onye e buru amụma banyere ya (na raczac a bụrụ ọnụ).
Ọ bụla ogologo njem magburu onwe ya na-esochi ihe omume Eragon na Saphira, ma ọtụtụ ndị mmadụ echewo ma Christopher ọ̀ ga-alaghachi n’ụwa Alagaësia. Ee, ọ ga-eme ya! N'ezie, Christopher nwere atụmatụ ọdịnihu maka ọtụtụ akụkọ Alagaësian ndị ọzọ!.
Site n'enyemaka nke Morzan, Galbatorix zuru Shruikan mgbe o gbuchara onye na-agba ya n'ezie. O jiri anwansi siri ike gbagọọ uche dragọn ahụ, ka Shruikan wee jee ozi dị ka dragọn ọhụrụ Galbatorix. Galbatorix ji Ime Anwansi mee ka Shruikan na-eto ngwa ngwa, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu nha.
Bush mere ogbugbu Yazuac, kwadoro. “Eragon, nwa m nwoke. Abụ m nna gị.”
A kọwara Eragon nwere ntutu isi na-acha aja aja na anya aja aja. Eragon nwere ntutu isi na anya na-acha anụnụ anụnụ. Eragon dị afọ iri na ise na mmalite nke akụkọ ahụ. Eragon dị afọ iri na asaa na mmalite nke akụkọ ahụ.
Otu n'ime ihe kpatara ihe nkiri ahụ dara ada dị mfe: ihe nkiri Eragon dị nnọọ iche na akụkọ mbụ. Ọtụtụ akụkụ nke ihe nkiri ahụ bụ ihe kpatara ọdịda ya: Dị ka e kwuru na mbụ, otu n'ime akụkụ ndị bụ isi, ihe mere ihe nkiri a ji gbasaa, bụ n'ihi na nkata ahụ dị nnọọ iche na akwụkwọ ahụ.
Brandon Sanderson net values: Brandon Sanderson bụ onye odee America nke nwere ọnụ ahịa ruru $6 nde. Brandon Sanderson mụrụ na Lincoln, Nebraska na December 1975.Brandon Sanderson Net Worth. Netwọk bara uru: $6 nde nwoke na nwanyị: Ọka nwoke: Onye ode akwụkwọ, onye ode akwụkwọ obodo: United States of America.
Akwụkwọ kacha ere ngwa ngwa n'akụkọ ihe mere eme bụ Harry Potter and the Deathly Hallows, nke asaa - na nke ikpeazụ - akwụkwọ akụkọ na usoro JK Rowling's (UK) Harry Potter, nke rere nde 8.3 n'ime awa 24 mbụ (ma ọ bụ akwụkwọ 345,833 kwa elekere), na-esochi. ewepụtara ya na USA na 00.01 na 21 Julaị 2007.
Murtagh bụ onye stoic, nwoke dị afọ iri na asatọ. Anya ya siri ike ka e ji mkpọchi nke ogologo ntutu isi ya na-acha nchara nchara kechie. Akpụchara ya ajị agba, agba ya nke ọma, muscular, ma dịtụ ogologo karịa nwanne nne ya bụ́ Eragon.
N'ihe nketa, Arya meghachiri omume n'ụzọ ziri ezi maka ngosi nke abụọ nke Eragon mere ya wee gbanwee ezi aha ya na ya. N'isiakwụkwọ ikpeazụ nke akwụkwọ ahụ, ọ kwụsịrị ime ka a na-eme onwe ya ruo nwa oge ole na ole, na-ekpughe na ya nwere mmetụta n'ebe ọ nọ.
Roran dị n'agbata afọ iri na asaa/ọnwa asatọ na afọ iri na asatọ na ọnwa ise.
Ogwu bụ dragọn na-acha uhie uhie, jikọtara ya na Murtagh. Shruikan zụrụ ya ịlụ ọgụ na n'oge Agha nke Burning Plains ọ nwere ike iku ume ọkụ. Thorn nwere nkà n'ọgụ ikuku, na-enwe ike ịsọ mpi Saphira, ọbụna mgbe e merụrụ ya ahụ nke ukwuu.
Mpempe akwụkwọ nke mbụ nke USA, na-egosipụta dragọn uhie uhie Ogwu Odee Christopher Paolini Dewey Decimal [Fic] 22 LC Class PZ7.P19535 El 2005 Eragon buru ya ụzọ.
Ọ na-abụkarị ndị kasị ochie ma ọ bụ ike kachasị ike n'ime ndị na-agba ịnyịnya, ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ maara ihe (dị ka Vrael bụ onye isi Dragọn Rider, ma dị ka Galbatorix si kwuo, Oromis bụ onye maara ihe). Eragon mbụ, Anurin, Vrael na Eragon Shadeslayer bụ ndị isi dragọn ndị na-agba ọsọ ma bụrụ ndị a kacha mara amara na usoro a.
Mba, Eragon na Arya anaghị esusu ọnụ na ihe nketa. Mgbe e merichara Eze Galbatorix, ha na-ekwurịta ọdịnihu ha ọnụ, ma ha kpebiri na ọ bụ ya.
Ezi aha Eragon bụ Hiro Gary-Stu Protagonist the XXIII. @paolini bollocks.
N'agbanyeghị mmekpa ahụ ọ na-ata, ịhụnanya Murtagh nwere n'ebe Nasuada nọ na-eto eto ga-enye ya ohere ichebe ya nke ọma n'ike ya megide ngwá ọrụ eze na-ata ahụhụ. Ọ bụ ezie na ọ kpọrọ ya asị na mbụ, o mesịrị hụ ya n'anya ma malite imeghachi mmetụta ya n'ihi na ọ ghọrọ nanị enyi ya.
Azịza ọsọ ọsọ: Gịnị bụ Akwụkwọ nke anọ n'ime usoro ihe nketa a na-akpọ
Kedu mgbe akwụkwọ nke 5 nke usoro ihe nketa ga-apụta
Ajụjụ: Usoro ihe nketa ọ dị mma
Azịza ọsọ ọsọ: Onye dere okirikiri nketa
Ogologo oge ole ka okirikiri ihe nketa dị
Akwụkwọ ole dị n'usoro ihe nketa
Azịza ọsọ ọsọ: Akwụkwọ ole dị n'usoro okirikiri nketa
Azịza ọsọ ọsọ: Akwụkwọ ole dị na okirikiri nketa
Azịza ọsọ ọsọ: Enwere m ike ịpụta n'ụbọchị nke ise nke okirikiri m
Ajụjụ: Gịnị bụ akwụkwọ ndụ ndụ ndụ
Christopher Paolini ọ chọrọ usoro onyonyo maka okirikiri ihe nketa
Azịza ọsọ ọsọ: Onye dere akwụkwọ ahụ Uhie Uhie